Aqoonyahan Ciid Xasan Muuse oo magaalada London ku shaaciyey inuu u sharaxan yahay Dooroshada Golaha Wakiilada Somaliland ee 2017ka + SAWIRO. |
Aqoonyahan Ciid Xasan Muuse oo magaalada London ku shaaciyey inuu u sharaxan yahay Dooroshada Golaha Wakiilada Somaliland ee 2017ka + SAWIRO.
Xaflad aad u balaadhan oo lagu soo bandhigay musharaxnimada Muwaadin Iid Xasan Muuse ee dooroshooyinka golaha wakiilada ayaa habeenkii xalay ahayd ku qabsoontay galbeedka magaalada London. Xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimayay ayaa waxa ka soo qaybgalay dadweyne badan oo ka kala yimid magaalooyinka London, Bristol, Birmingham iyo Milton Keyns .
Goobtaasi ayaa waxa laga jeediyey qudbado badan oo dhinac walba taabanaya, iyadoo aad looga sheekeeyay taariikhda musharax iid xasan muuse oo ka mid ahaa tani kuraynimadiisii dadka aadka ay ugu dheertahay qadiyada Somaliland hadh iyo habeena u taagan inuu u ololeeyo.
Musahrax Eid Xasan Muuse ayaa ah ninka qudha ee UK ku guulaysta inuu ka hirgeliyo oo uu furo xafiis ay leedahay jaaliyada Somaliland ee Galbeedka London (West London Somaliland Community). Musharax Eid Xasan ayaa ahaa gudoomiyahii ururkii Nomad ee laga dhisay dalka Holland bilowgii sanadkii labada kun ee ahaa ururkii ugu horeeyay oo qabta xaflad weyn oo 18ka May lagu xusay sanadkii 2001dii oo yurub oo dhan la iskga wada yimid dalka Holland dad gaadhaya 4 kun oo qof, wixii intaas ka danbeeyayna hawashaas xuska 18ka May ee ay bilaabeen waxay noqotay mid aduunka oo dhan meel walaba ku faafta oo aduunka oo dhan laga xuso.
Eid xasan oo halkaas ka jeediyey qudbad aad u dheer oo dhinacyo badan taabanaysa iyo hadii uu ku guulaysto kursiga golaha wakiilada waxyaabaha ugu muhiimsan inuu wax ka qabto ayaa dadku aad ugu riyaaqeen oo aad loogu sacbiyey.